लगानीकर्ता सङ्घ एउटै भए पुग्छ | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता लगानीकर्ता सङ्घ एउटै भए पुग्छ
लगानीकर्ता सङ्घ एउटै भए पुग्छ
दिवाकर खड्का, युवा लगानीकर्ता
विगत १६ वर्षदेखि पूँजीबजारमा लगानी गर्दै आएका दिवाकर खड्का युवा लगानीकर्ताको रूममा परिचित छन् । प्राथमिक बजारबाट लगानी गर्न थालेका उनले दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न थालेको पनि १० वर्ष नाघिसकेको छ । उनी लगानीकर्ताको हितका लागि धेरै सङ्घ नचाहिने तर्क गर्छन् । यसै सम्बन्धमा आर्थिक अभियानकी सुप्रिम तिवारीले उनीसँग गरेको कुराकानीको सार :
पूँजीबजारमा प्रवेश गर्नुभएको कति भयो ?
मैले कलेज पढ्दादेखि नै शेयरमा लगानी गर्न थालेको हुँ । मेरो पहिलो लगानी कुमारी बैङ्कको आईपीओ हो । वर्षको हिसाबमा भन्नुपर्दा १५/१६ वर्ष भयो ।
पछिल्लो समय युवा वर्गको आकर्षण वैदेशिक रोजगारीमा छ । तपाईं भने यहीँको पूँजीबजारमा लाग्नुको कारण हो ?
पूँजीबजारमा मैले प्राथमिक बजार बजारबाट प्रवेश गरेँ । दोस्रो बजारमा २०६३/६४ सालतिर छिरेको हुँ । त्यो समयमा बजारको अवस्था राम्रो थियो र मैले पनि राम्रो नाफा कमाएँ । युवा अवस्थामौ सजिलै नाफा कमाएकाले पनि यस क्षेत्रमा म आकर्षित भएँ । आईपीओमा किनेको शेयरबाट दोस्रो बजार पुगेपछि नाफा नभई घाटा भएको भए म यस क्षेत्रमा अघि बढ्ने थिइनँ होला ।
कतिओटा कम्पनीमा तपाईंको लगानी छ ?
म सानो लगानीकर्ता हुँ । मैले सानो सानो रकम धेरै कम्पनीमा छरेर लगानी गरेको छु । अहिले यति नै त भन्न सक्दिनँ, तर १ सयभन्दा बढी कम्पनीमा लगानी गरिसकेको छु ।
लगानी गर्दा राम्रो कम्पनी कसरी छान्नुहुन्छ ?
मैले सबै क्षेत्रका कम्पनीको शेयरमा लगानी गरेको छु । एउटा क्षेत्रमा भन्दा सबै क्षेत्रमा मिलाएर लगानी गरे जोखीम कम हुन्छ भन्ने मेरो धारणा छ । लगानी गर्नुपूर्व त्यस कम्पनीको विशेषगरी वित्तीय विवरण र सञ्चालकहरू हेर्ने गरेको छु । कम्पनी बलियो हुन त्यसका सञ्चालक र व्यवस्थापकसमेत अनुभवी हुन आवश्यक छ । दक्ष र अनुभवी सञ्चालक भएको कम्पनीले विगत वर्षमा नाफा नकमाए पनि भविष्यमा राम्रो नाफा कमाउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
पछिल्लो समय शेयरबजार घटिरहेको छ । यस अवस्थामा पनि नाफा कमाउन सक्नुभएको छ त ?
पूँजीबजारमा उतारचढाव हुनु एकदमै आवश्यक छ । बजार बढेर मात्र हुँदैन, घट्नु पनि पर्छ । उतारचढाव भइरहने बजारमा मात्र लगानीकर्ताले नाफा कमाउन सक्छन् । अहिले बजार निरन्तर ओरालो लागेको अवस्था छ । यो अवस्थामा शेयर बेच्दा घाटा हुने हो । मैले शेयर नबेची होल्ड गरेर राखेको छु । यसो गर्दा नाफा कमाएको त भन्न मिल्दैन, तर घाटा खाएको पनि छैन । किनकि, शेयरको मूल्य घट्दा बेचे पो घाटा हुने हो । यति बेला मैले प्राथमिक बजारमा निष्कासनमा आएका साधारण शेयरको आवेदन भने भर्न भने छुटाएको छैन । अहिलेको अवस्था हेर्दा किनबेच गर्ने अवस्था अलि छैन । शेयर बजारमा पनि राजनीति हुन थालेको छ । एउटा सरकार आउँछ, एउटा नियम लागू हुन्छ । छोटो समयमै सरकार परिवर्तन भएसँगै नीतिनियममा पनि परिवर्तन आउँछ । यसले गर्दा कम्पनीको शेयरमूल्यमा असर पर्छ । तर, बजार घट्दैमा आत्तिएर शेयर बेचिहाल्नु भने हुँदैन ।
कम्पनीहरूको वार्षिक साधारणसभामा सक्रिय सहभागी भएर आफ्नो भनाइ राख्दै आउनुभएको छ । तपाईंले दिनुभएको सुझाव कत्तिको कार्यान्वयन भएको जस्तो लाग्छ ?
मैले जति पनि कम्पनीको शेयर खरीद गरेको छु, ती सबैको वार्षिक साधारणसभामा सकेसम्म उपस्थित भई कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदनको आधारमा सुझाव दिने गरेको छु । तर, कम्पनीले शेयरधनीको सुझाव लिने काम औपचारिकताको रूपमा मात्र भएको पाइएको छ । कार्यान्वयन भएको त्यति देख्दिनँ । केही राम्रो एजेण्डा उठेमा त्यस विषयमा भने छलफल हुन्छ । यसमा एउटा राम्रो पक्ष के हो भने वर्षमा एकपटक हुने साधारणसभामा शेयरधनीले आफ्ना सुझाव तथा विचार राख्न पाउँछन् ।
पूँजीबजारको विकासलाई कसरी लिनुभएको छ ?
पूँजीबजारमा समय समयमा विकासका काम भइरहेका छन् । केही वर्षयता त शेयर बजारमा लगानी गर्न सहज भएको छ । लगानीकर्ताको मागअनुसार ब्रोकर कमिशनदर हटाइयो । यसबाट कारोबार गर्न सजिलो भएको छ । पहिले पहिले कम्पनीको खरीद तथा विक्री मूल्य थाहा पाउन ब्रोकरकै भर पर्नुपथ्र्यो । तर, अहिले मार्केट डेप्थमै सबै मूल्य देखाउँछ ।
अनलाइन ट्रेडिङ प्रणालीमा सहभागी हुन युजर नेम र पासवर्ड लिनुभयो ?
युजरनेम र पासवर्ड लिन ब्रोकरहरूबाट म्यासेज र कल आएको छ, अब चाँडै जान्छु । अनलाइन ट्रेडिङको चर्चा भइरहेको छ । यो पूर्णरूपमा लागू भएपछि बजारले सकारात्मक गति लिने अपेक्षा गरेको छु ।
पूँजीबजारको सम्बन्धमा सम्बद्ध निकायबाट भएको नीतिगत व्यवस्थामा कस्तो सुधारको खाँचो देख्नुहुन्छ ?
पूँजीबजारसँग सम्बन्धित निकायबीच एकआपसमा खासै मेल भएको देखिँदैन । एउटा संस्थाले एउटा कुरा उठाउँदा अर्को संस्थाले त्यसबारे थाहा नपाएको जस्तो गर्छ । सम्बन्धित निकायहरू एकआपसमा मिलेर साझेदारीमा कामकारबाही अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ । लगानीकर्ता सङ्घहरू पनि धेरै भए । लगानीकर्ताको हितमा लाग्ने हो भने संस्थागत रूपमा एउटा मात्र लगानीकर्ता सङ्घ हुनुपर्छ । यसो भएमा पूँजीबजार सम्बद्ध निकायसम्म लगानीकर्ताको आवाज पु¥याउन सजिलो हुन्छ ।
आफूले नेपालमै बसेर पूँजीबजारबाट आम्दानी गरिरहँदा विदेशिने आम युवालाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?
पूँजीबजार आफैमा एउटा राम्रो क्षेत्र हो । अहिलेको अवस्थामा शेयर बजारबारे थाहा नहुने कमै होलान् । हामी शेयर बजारमा प्रवेश गर्दा यसबारे विभिन्न जानकारी दिने, सिकाउने माध्यम खासै थिएनन् । अहिले अनलाइन पोर्टल र छापा सञ्चारमाध्यमले आर्थिक पृष्ठ तथा क्षेत्र छुट्ट्याएर यस शेयर बजारबारे जानकारीमूलक सूचना दिइरहेका हुन्छन् । फलानोले शेयर बेचेर पैसा कमाएछ, म पनि त्यही गर्छु भनेर लगानी गर्नुभन्दा पनि शेयर बजारबारे राम्ररी बुझेर मात्र लगानी गर्नुपर्छ । शेयर बजारका आधारभूत पक्ष बुझेर, कम्पनीले प्रकाशित गर्ने वित्तीय विवरण हेरेर, कम्पनीले कस्तो नाफा कमाएको छ, कति लाभांश वितरण गर्ने गर्छ र कति दिन सक्छ भन्ने विश्लेषण गरेर मात्र लगानीको निर्णय लिनुपर्छ ।
100 % सहिकुराहाे, दिवकार सर काे,